PEUGEOT (5008) , 2014 ,BGO – Super Seven Stars
PEUGEOT (5008) , 2014 ,BGO
Buy For 42 000$
Exterior Color Rich Oak
Interior Color Claudia Tramontane – Leather
Warranty Expiry Date 26-Oct-2019
Peugeot (5008) ကားသည် Engine Power 2.0 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade ကား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ……
ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်း နှင့် အဆင်မြင့် Options များစွာပါဝင်သည့်7ယောက်စီး Peugeot 5008
Head lamp washer ပါဝင်သောကြောင့် High way ခရီးသွားလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှေ့မီးကြီးမီးထွန်းရာတွင် အနှေုာင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ဖုန်၊ အမှိုက်သရိုက် များကပ်ညှိနေပါကကားမောင်းနှင်နေရင်းဖြင့် ရေဖျန်းသန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။
HID (High Intensity discharge) System သည် သာမန်မီးလုံးထက် အလင်းပြန့်ကားမှုပိုများခြင်း၊ အလင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ပိုများခြင်းတို့ ကြောင့် လမ်းနှင့်အရာဝတ္ထုများအား နေ့ အချိန်မောင်း နှင် နေသကဲ့သို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်။
Peugeot 5008 တွင် Driver ခုံနှင့် Passenger ထိုင်ခုံတို့ကိုအနွေးဓာတ်ရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သောHeated Ventilated Seats System ပါဝင်သောကြောင့်ရာသီဥတုအေးသောအချိန်များ နှင့် ဆောင်းတွင်းမောင်းနှင်သောအခါများတွင်အနွေးဓာတ်ဖြင့်လိုရာခရီးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်ပါသည်။
Peugeot 5008 ကား၏ ဒုတိယခုံတန်း နှင့် တတိယခုံတန်းရှိ ခုံများအားလုံးကို ခေါက်ထားပြီး ကားအတွင်းခန်းကိုပါ နေရာကျယ်ဝန်းအောင်ဖန်တီးနိုင်သဖြင့် ပစ္စည်းများစွာ တင်ဆောင်လိုပါကလည်း အဆင်ပြေစေပါသည်။
ကားအနောက်တွင် Reverse Light နှင့် Fog Lamp ကို တစ်ဘက်စီ တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။
. Head up Display သည် ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း ကား၏အမြန်နှုန်း/ cruise ဖြင့် မောင်းနှင်နေသော နှုန်း/speed limit များကို Dash Board ပေါ်တွင် Screen သီးခြားဖော်ပြပေးနိုင်သဖြင့် မောင်းနှင်သူမှာ ဒိုင်ခွက်ကိုငုံကြည့်စရာမလိုပဲ မြင်နိုင်သဖြင့် ပိုမို အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Peugeot 5008 တွင်ပါဝင်သော Parking Space Sensors မှာကားပါကင်ထိုးမည့် Kilo 20 အောက် မောင်းနှင်နေသည့်အချိန်၌ ကားပါကင်ထိုးရန်နေရာလွတ်တွင် မိမိကားနှင့် ကားပါကင် နေရာလွတ် အကျယ်အ၀န်းကိုချိန်ဆပေးပြီး ကားပါကင်ထိုးရာတွင် မိမိကား နှင့် သင့်တော်သောနေရာကိုရှာဖွေ၍ ဒိုင်ခွက်တွင်အချက်ပြပေးပါသောကြောင့် မိမိကားနှင့် ပါကင်နေရာ မလွတ်မှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲလွယ် ကူလျင်မြန်စွာဖြင့် ကားပါကင်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်သည့်အပြင် ကား၏အရှေ့ဘက်တွင် Parking Sensors (4) လုံးနှင့် အနောက်ဘက်တွင် (4)လုံးပါရှိ်ပါသည်။
Peugeot 5008 ၏ အတွင်းခန်းများတွင် 12 Volt Power Supply ပေးသော Sockets3ခုပါဝင်ပါသည်။ ကားရှေ့ခေါင်းခန်းတွင် တစ်ခု၊ အလယ် Passenger ခုံရှေ့တွင်တစ်ခု၊ နောက်ဆုံးခုံတန်းဘေးတွင် တစ်ခုပါဝင်သည့်အတွက် အသုံးပြုရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Particle Filter ပါဝင်သောကြောင့် ကားအိပ်ဇောမှ ထွက်လာသော အငွေ့များတွင်ပါဝင်သော ဒီဇယ် အကြွင်းအကျန်များကို လေထုထဲသို့ ရောက်မသွားအောင် စစ်ယူပေးထားသောကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။
နောက်ကြည့်မှန်မှာ Electronic Chromics Mirror ဖြစ်သောကြောင့် ညအချိန်ကားမောင်းနေစဉ် မိမိယာဉ်နောက်မှကားမီးကြောင့်အလင်းစူးရှမှုမဖြစ်စေရန် နောက်ကြည့်မှန်တွင် အလိုအလျောက် အလင်းအားလျော့ချပေးခြင်းအားဖြင့် ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘက်ဂီယာထိုးလျှင် နောက်ရှိမြင်ကွင်းအား ပြတ်သားစွာ မြင်စေရန်ထိုစနစ် အားရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန်အလင်းပြန်မှုအား အလိုအလျှောက်ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။
Peugeot 5008 ၏ ကားဒက်ရ်ှဘုတ်ပေါ်တွင် Foldable Display Screen ပါဝင်သောကြောင့် tablet တစ်ခုသဖွယ်အသူံးပြုရလွယ်ကူပြီး Audio/ Radio channel နှင့် အခြား information များအား ဖေါ်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Peugeot 5008 တွင် Electric Stability Control (ESC) ပါဝင်သောကြောင့် အရှိန်နှင့် မောင်းနှင်နေသောအခါ မော်တော်ယာဉ်အား ရုတ်တရတ် ကွေ့ရာတွင် ဖြစ်တတ်သော မော်တော်ယာဉ် တရွတ်ဆွဲခြင်း၊ လားရာလွဲခြင်းအား ကာကွယ်သောပေးပါသည်။ ထိုစနစ်သည် မော်တော်ယာဉ်၏ ဦးတည်ချက်လားရာအတိုင်းသွေဖီမသွားအောင်ထိန်းကျောင်းပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်။
Peugeot 5008 ကား၏Dash board တည်ဆောက်ပုံမှာ Leather Dash Board ဖြစ်ပြီး Leather အနံ့မှာလည်းပုံမှန်ကားများသကဲ့သို့ Leather အနံ့မနံစေဘဲ Peugeot ကား၏ Leather များသည် ပြင်သစ်အသုံးအဆောင်များကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက် သူများအနေဖြင့်အထူးသင့်တော်သောကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
Peugeot 5008 တွင်ပါဝင်သော Tire Pressure မှာလမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း Tire လေပေါင်ချိန်များကိုဒိုင်ခွက်တွင်ဖော်ပြသောကြောင့် ကား၏လေပေါင်ချိန်လျော့နည်းမှုကိုသိရှိနိုင်ပြီး အန္တရယ်ဖြစ်လာနိုင်မှုမှကြိုတင်ဟန့် တားပေးသော System ပါရှိပါသည်။
ကား၏အလယ် Passenger ခုံတန်းရှေ့တွင် External Device နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Audio System နှစ်ခုလည်း ထပ်မံပါရှိပါသည်။
နောက်မီးခွက်တွင် LED 12 လုံးကို အသုံးပြုထားသဖြင့် အလင်းအားပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှု လျော့ကျစေပါသည်။
ခရီးဝေးသွားရာတွင် အအေးဗူးများ၊ ရေဗူးများကိုကားအတွင်းတွင် သယ်ဆောင်သွားလိုပါက အအေးဓာတ် ထိန်းပေးနိုင်မည့် Glove box cooling system ပါဝင်ပါသည်။
Peugeot 5008 တွင် Motion Sensor ပါဝင်သောကြောင့် ကားတံခါး Lock ချပြီးနောက် ကားအထဲတွင်လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကအချက်ပြပေးပါသော Sensor ပါရှိ်ပါသည်
Electric Parking Brake စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် ပုံမှန် Hand brake များထက် အားသာချက်မှာ Manual လက်ဖြင့် ဆွဲ/ချ စရာမလိုပဲ ခလုပ်နှိပ်ရုံဖြင့် parking brake ဖြစ်ပြီး ကားပြန်ထွက်လျှင် လီဗာနင်းရုံဖြင့် Auto Parking brake ဖြုတ်ပေးသောစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။
Head up Display control bottom, Sunroof, Hazard lamp နှင့် Parking assist sensor ခလုတ်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် တပ်ဆင်ပေးထားသဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဲကွန်းစနစ်အား driver/pessenger တစ်ဖက်စီမှ Control လုပ်၍ရနိုင်ခြင်း၊ ကားအတွင်း temperature အပေါ်မူတည်၍ အဲကွန်းအမြန်နှုန်းအား အော်တိုမစ်တစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အအေးဒဏ် မခံနိုင်သူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် အအေးနှစ်ခြိုက်တတ်သူ လူငယ်များ အတူတကွစီးနင်းရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Super Seven Stars Motors မှ မော်တော်ယာဉ်များအား အောက်ပါအချက်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်..
Selling Price 42,000
30% Down Payment 13,608
Monthly Payment For 1 Year 2,626
30% Down Payment 13,902
Monthly Payment For2Years 1,398
30 % Down Payment 14,196
Monthly Payment For3Years 991